थकान कम गर्न भुलेर पनि नपिउनुहाेस् चिया, कारण यस्ताे छ – Himalaya TV
Home » समाचार » थकान कम गर्न भुलेर पनि नपिउनुहाेस् चिया, कारण यस्ताे छ
थकान कम गर्न भुलेर पनि नपिउनुहाेस् चिया, कारण यस्ताे छ
२२ माघ २०७४, सोमबार १७:५३
के तपाइँलार्इ राती मस्त सुतेर पनि दिनमा थकान महसूस हुन्छ? यदि यसाे हाे भने यसले स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेकाैं समस्यातर्फ इंगित गर्दछ । थकानले मन उदास रहनुका साथै कुनै काममा पनि मन जाँदैन र काम राम्राेसँग सम्पन्न हुँदैन ।
थकाइ लाग्नुकाे मुख्य कारण यस्ता छन् :-
पानी कम पिउनाले शरीर कमजाेर हुन गर्इ थकान महसूस हुन थाल्छ । नुनिलाे चिज धेरै खानाले शरीरकाे पानीकाे मात्रा चाँडाे सकिन जान्छ । शरीरमा पानीकाे कमी भएकाे बेला कफी वा चिया पिउनाले डिहाड्रेसन वा जलवियाेजनकाे स्तर खतराकाे तहमा पुग्न सक्छ । यस्ताे बेला पानीकाे साथसाथ हर्बल चिया, नरिवल पानी वा फलफूलकाे रस पिउनु उत्तम मानिन्छ ।
अालस्यता वा थकान हटाउनका लागि अाइरन एवं भिटामिन बी१२ ले भरपूर खाद्य पदार्थ खानामा सामेल गर्नुपर्छ । यी दुर्इ तत्वकाे अभावले शरीरमा थकाइ वा कमजाेरीकाे महसूस गराउँछ । भिटामिन बी१२ ले रक्तकाेषहरूलार्इ काम गर्न सहयाेग गर्दछ । यसकाे कमीले शरीर जागै रहेर पनि थकान एवं निन्द्रा लागेकाे अनुभव गराउँछ ।
यदि तपाइँ सामान्यभन्दा धेरै व्यायाम गर्नुहुन्छ वा एकदमै कम कसरत गर्नुहुन्छ भने पनि थकानकाे अनुभूति गराउँछ । त्यसैले बरु अाधा घण्टा मात्र किन नहाेस्, व्यायाम अवश्य गर्नुहाेस् । तर व्यायाम गर्दा अाफ्नाे शारीरिक क्षमता अनुसार मात्र गर्नु राम्राे हुन्छ ।
एकैचाेटि धेरै काम
एकैपटक धेरै काम गर्न थाल्नुभयाे भने शरीरकाे साथसाथै दिमाग पनि थाक्छ । मल्टी-टास्किंग अर्थात् एकैचाेटि धेरै काम गर्नाले एकाग्रतापूर्ण तरिकाले काम गर्ने दिमागकाे अवयव प्रभावित हुन जान्छ र थकाइ वा अालस्यताकाे महसूस हुने गर्दछ ।
यस्ता छन् माैसमी रुघाखाेकीबाट मुक्ति पाउने घरेलु उपाय
किन खानु हुन्न टमाटर र काँक्रो एकैसाथ ? अरु के-के नखाने ?
यी हुन् जाडोसँग लड्ने शक्तिबर्द्धक १० खानेकुरा